Madaxweynaha Puntland oo Furay Kalfadhigii 36-aad ee Barlamaanka Puntland – Radio Daljir
Madaxweynaha Puntland oo Furay Kalfadhigii 36-aad ee Barlamaanka Puntland
Oktoobar 25, 2015 7:05 b 0
Axad, Oktoobar 25, 2015 (Daljir) —Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 25-10-2015 si rasmi ah u furay kalfadhiga 36-aad ee Baarlamaanka Dawladda Puntland , kaasi oo uu ka furay xarunta Baarlamaanka magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland.
Xafladda furitaanka ayaa waxaa ka soo qeyb-galay wasiiro, xildhibaano, golaha Garsoorka, madaxda Dhaqanka, wakiiladda urada bulshada rayidka ah, wakiiladda hey\_’addaha caalamiga ah, Qunsuliyada Dawladda Ethiopia, bahda Saxaafadda iyo masuuliyiin kale.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Dawladda Puntland Siciid Xassan Shire oo ka hadlay Madasha ayaa sheegay in mudanayaasha Baarlamaanka Puntland bogaadinayaan horumarka balaaran ee ka soconaya guud ahaan Puntland, gaar ahaan Gobalka Mudug oo qaaday dhabada Nabadda iyo Horumarka.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo khudbad taariikhi ah ka jeediyey furitaanki kalfadhiga ayaa mudanayaasha uga warbixyey waxqabadka Dawladda ee mudadii u dhaxaysay labada kalfadhi ee sanadkaan .
‘’ Maanta Gobal kasta oo Puntland ah waxaa lagu seexday , laguna soo toosay nabad, wax shiddo iyo dhib ah oo kajira majiraan , waa wax ilaahay loogu mahdiyo in maanta meesha aad rabtid Puntland mari karto adiga oo aan wax walwal ah qabin ‘’ Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in si xawli ah uu ku soconayo isbadalkii lagu sameynayey ciidanka Booliska Puntland , tababarna loo soo xiray ciidan boolis ah oo qalabkoodu u dhamaystiran yahay tiro ahaana gaaraya 1,200 oo askari.
‘’ Ciidamada Daraawiishta Puntland ee taageeraya ciidamada kale ee qalabka sida waxay guulo wax ku ool ah ka soo hoyeen cadowga Al-shabaab ee ku dhuumaalaysaneyey buuralayda Galgala , dagaalkii aan cadowgaasi kula jirnayna waxaa uu marayaa heer gabo gabo ah ‘’ Ayuu yiri Madaxweynuhu .
Madaxweyne Gaas ayaa qiray in Puntland maalinba maalinta ka dambeysa gaarayso horumar la taaban karo oo ku aadan dhanka kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka , waxaana fulay inta badan balanqaadkii madaxweynaha xiligii uu tartamayey.
‘’ Waxaa bisha Dicember hadii rabbi idmo dhamaanaya dhismihii garoonka diyaarha ee magaalada Boosaaso , oo aan rajeynayo in dhawaan ay yimaadaan duulimaadyo caalami ah , waxay Puntland iyo dadkeeduba kabixi doonaan go’doonkii iyo silicii dhanka socdaalka ‘’ Ayuu hadalkiisa sii raaciyey Madaxweyne Gaas.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxmaed Cali Gaas ayaa markii uu dhammaayey khudbadiisa , islamarkaana si rasmi ah u daahfuray kalfadhiga 36-aad ee baarlamaanka Puntland , waxaa uu kormeeray Taliska ciidanka Booliska Puntland ee Garoowe oo la soo gaarsiiyey qalab casri ah oo ay ku howlgalayaan ciidanka Booliska Dawladda Puntland.
Barlamaanka Puntland oo Yeelanaya Kalfadhigoodi 36-aad